गाेकुल बाँस्कोटाविरुद्ध छानबिन हुन्छ : गृहमन्त्री - Kantipath.com
गाेकुल बाँस्कोटाविरुद्ध छानबिन हुन्छ : गृहमन्त्री
सुजन ढकाल हेटौंडा । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अडियो टेप प्रकरणबारे छानविन हुने बताएका छन् । निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा विरुद्ध सरकारले छानविन गर्ने भन्दै उनले यो विषयमा सरकारले काम सुरु गरिसकेको बताए ।
सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैया“ कमिसनको डिल गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि नैतिकताका आधारमा विहिबार राजीनामा दिएका बास्कोटा विरुद्ध सरकारले छानविन गर्ने गृह मन्त्री बादलको भनाई छ ।
बाग्मती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्न हेटौंडा आएका बादलले सञ्चारकर्मीहरु सँग कुरा गर्दै उनले सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाएर काम गरिरहेको बताए ।
‘सञ्चारमन्त्रीले यो विषय बाहिरिएसँगै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु भएको छ,’ उनले भने,‘यो विषयमा सरकारले आवश्यक छानविन गर्नेछ । गाेकुलको विरुद्ध सरकारका विभिन्न निकायले आवश्यक अनुसन्धान गर्नेछ ।
नेकपा स्थायी समिति बैठकमा पार्टीबाट पनि छानविन हुनु पर्ने माग उठिरहेको बेला स्थायी समितिसदस्य समेत रहेका बादलले बास्कोटा विरुद्ध सरकारका निकायले मात्रै छानविन गर्ने बताएका छन् ।
उनले अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बसह पनि उपयुक्त ढंगले टुंगो लगाउने बताएका छन् ।
एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ दलले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सदनबाट पारित हुने बताए । ‘नेकपाले यसको विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो र त्यसको प्रतिवेदन पनि प्राप्त भइसकेको छ, उनले भने ।
सोही प्रतिवेदनको जगमा यो विषय अघि बढ्छ । नेपालको विद्युत र सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भित्रिने क्रममा रहेकोछ । यो बहसलाई हामी सही ढंगले अवतरण गर्छौं ।’
कालापानीमा देखिएको सीमा विवादको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए । नेपाल भारतबीच देखिएको सीमा विवाद कुटनीतिक ढंगबाट टुंगो लाग्ने समेत उनले दावी गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयमा आवश्यक पहल गरिरहेको छ, उनले भने, ‘सरकारले छिट्टै दुई देशबीच यो विषयमा कुटनीतिक तवरमा वार्ता गर्नेछ ।
हाम्रो उच्च चासोको विषय बनेको विषय हो । हामी यसलाई उचित सम्बोधन गछौं ।’ उनले सरकाले गतवर्षलाई आधार बर्षमा विकासको अधार तयार गरी देशमा समृद्ध र विकासको थालनी भइसकेको भन्दै अर्थिक विकास वृद्धिदर गतवर्षको तुलनामा राम्रो रहेको बताए । मन्त्री बादलले देशमा आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यसहित सरकर अघि बढेको र अहिले आयतमा कमी आएको र निर्यातमा वृद्धि भएको दाबी गरे ।
शान्ति सुरक्षाको सवालमा अहिले देशमा कुनै पनि खतरा नरहेको उनले बताए । ‘अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य छ,’ उनले भने,‘हिंशा, अराजकता, अपराध नियन्त्रणमा आएको छ । सरकारले नागरिकको सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
’समृद्धि र विकासको थालनी भइसकेको उनले दावी गरे । सरकारको दुई वर्ष उपलब्धी मुलक रहेको उनको भनाई छ ।
सुरक्षा गोष्ठीमा वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत् १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखलगायत सहभागी रहेका छन् ।
गोकुल प्रकरणबारे ओली र प्रचण्डमा छट्पट्टी
ओलीले नैतिकता गुमाइसक्नुभयो : डा. कोइराला
बास्कोटामाथि छानबिन गर्न ओलीद्वारा अस्वीकार
विप्लवले भन्याे- ‘ओलीका असली चेला’को कमिसन काण्डले देश लज्जित भयो
‘सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि मिलोमतो भएको देखिन्छ’
७० करोड कमिसन प्रकरण : दोषी प्रमाणित भए गोकुललाई ८ वर्ष जेल हुने
गोकुल बाँस्कोटाको विवादित यात्रा
ओलीको पहिलो कार्यकालमै सेक्युरिटी प्रेस खरिद कार्यक्रम
‘पूर्व सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार’
७० करोड घुस काण्डमा हाम्रो संलग्नता छैन : स्विस दूतावास
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको घुसकाण्डको समाचार नयाँपत्रिकाले छाप्न नमानेपछि पत्रकार पुष्पले दिए राजीनामा
बास्कोटाको राजीनामा स्वीकृत, सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा युवराजलाई
समाचार फैलाएको आरोपमा २ जनाविरुद्ध साइबर क्राइम अन्तर्गत कारबाही गर्न लेखा समितिको निर्देशन
अख्तियारद्वारा सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको कार्यालयमा छापा
सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाकाे १६ शब्दे स्पष्टीकरण
सञ्चार मन्त्री बास्काेटा भन्छन् गल्ती गरेको भए मै जाउला
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको घुसकाण्डको समाचार नयाँपत्रिकाले छाप्न नमानेपछि पत्रकार पुष्पले दिए पदबाट राजीनामा
बाँस्कोटालाई तल्काल राजीनामा गराउन प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डकाे सुझाव
पूर्व मन्त्री गिरीले मागे प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको राजीनामा
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाकाे ७० करोडकाण्ड बाहिरिए लगत्तै बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो ट्वीट
‘नखाएको विष लाग्दैन, केहि दिन मजा लिन दिनुस्’- मन्त्री बाँस्कोटा
७५ करोड कमिसन माग्ने मन्त्रीको कति छ सम्पति ? (हेर्नुहोस सम्पति विवरण)
राजीनामा दिने तयारीमा सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटा
सञ्चारमन्त्री बास्कोटा ज्यू ! के ७० करोडवाला अडियो नियोजित षड्यन्त्र नै हो त ?
Previous Previous post: कोरियामा कोरोना त्रास
Next Next post: ओलीको जन्मदिनमा आठराई गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा
जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागु गर्दै अपराध महाशाखा
धान डुब्यो, गहुँ लाउने आश म-यो
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको चार किलोमा सडक भासियो, दिनभर यातायात अवरुद्ध हुने
कम्युनिस्ट सरकारकाे राज, राष्ट्रपति भण्डारीका ‘भाञ्जा’ उपकुलपतिमा नियुक्त
फेरी डाक्टर गोविन्द केसी १२ औं अनशन बस्ने
‘बालुवा नचाले चुलामा आगो बल्दैन’